အိမ်မက်စေရာ: လှည့်ကြည့်ရင်း နှုတ်ဆတ်မိတဲ့ ၂၀၁၂( တဂ်ပို့စ် )
Posted by အိမ်မက်စေရာ at 9:49 AM
နောက်ကျပြီးမှ လာဖတ်မိတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် အစ်မ ရေ ... ။ အခုတလော ကျနော် လည်း အလုပ်နည်းနည်း များနေလို့ ပါ ... ။ အစ်မရဲ့ တစ်နှစ်တာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ နေရက်တွေက ခံစားမှု အစုံပဲနော် ..... ။
၂၀၁၃ နှစ်သစ်ဟာ အမအတွက် ကံကောင်းတွေ ယူဆောင်တဲ့ နေ့ ရက်တွေ ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ... ။
why u hidding your really profile my sis you are really selfish! your holiday is just only u or what? yah! you r so good girl coz you are so ............ . happy new year n whishing for u ( god bless u )